Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia an'i Saint Kitts sy Nevis » St. Kitts & Nevis dia manavao ny fepetra takiana amin'ny mpandeha ho an'ny mpandeha rivotra iraisam-pirenena vita vaksiny
St. Kitts & Nevis dia nanambara ny fanovana ny takiana amin'ny fitsangatsanganana ho an'ny mpandeha iraisampirenena, tonga amin'ny alàlan'ny rivotra, izay vita vaksiny feno tamin'ny COVID-19
Mpandeha iray dia heverina ho voan'ny vaksiny tanteraka rehefa afaka tapa-bolana lasa izay ny nahazo ny dosie faharoa
Ireo mpandeha an-habakabaka feno vaksiny dia asaina manao "Vacation in Place" ao amin'ny hotely Travel Travel nandritra ny sivy andro monja
Ny mpizaha tany dia tsy maintsy mameno ny endrika fahazoan-dàlana momba ny dia amin'ny tranokala nasionaly
Ny praiminisitra St. Kitts sy Nevis, Dr. the Honorable Timothy Harris dia nanambara ny fanovana ny fepetra takiana amin'ireo mpandeha iraisampirenena, izay tonga tamin'ny fiaramanidina, izay vita vaksiny feno tamin'ny COVID-19 nanomboka ny 1 may 2021.
Ireo mpizahatany iraisampirenena izay vita vaksiny tanteraka dia takiana amin'ny fandefasana ny karatra ofisialy vaksiny vaksiny rehefa mamita ny fizotran'ny fahazoan-dàlana hivezivezena ao amin'ny tranokala nasionaly, ankoatry ny fitsapana adiny 72-RTR-PCR sy ireo antontan-taratasy hafa ilaina amin'ny fahatongavan'ny mpandeha.
Azafady mba jereo eto ambany ny takian'ny dia ho an'ny mpandeha an'habakabaka iraisana manomboka ny 1 Mey 2021:
Ny mpandeha iray dia heverina ho voan'ny vaksiny tanteraka rehefa lasa ny tapa-bolana hatramin'ny nahazoany ny fatra faharoa tamin'ny andiana vaksinina fatra roa (Pfizer / BioNTech, Moderna na AstraZeneca / Oxford) na roa herinandro taorian'ny nahazoan'izy ireo vaksinina fatra tokana (Johnson + Johnson). Ny karatra ofisialin'ny vaksiny COVID-19 an'ny mpitsangatsangana dia horaisina ho porofo.
Ny mpitsangatsangana feno vaksinina feno fanatanjahantena dia asaina manao "Vacation in Place" ao amin'ny hotely Travel Approved mandritra ny sivy (9) andro vs. 14 andro ankehitriny.
Ny 20 Mey 2021 nanomboka ny XNUMX Mey XNUMX dia avela hiditra amin'ireo toeram-panatanjahantena.
Ny mpitsangatsangana dia tsy maintsy mameno ny endrika fahazoan-dàlana momba ny fitsangatsanganana amin'ny tranokala nasionaly ary mampakatra valim-panadinana COVID-19 RT-PCR ofisialy avy amin'ny laboratoara CLIA / CDC / UKAS nankatoavin'ny ISO / IEC 17025 nalaina 72 ora alohan'ny dia. Ho an'ny diany dia tokony hitondra kopian'ny fanandramana COVID- 19 RT-PCR ratsy sy ny karatra fisoratana vaksiny COVID-19 izy ireo ho porofon'ny fahavitan'izy ireo vaksiny. Aza adino, ny fanandramana COVID-19 PCR azo ekena dia tsy maintsy alaina amin'ny santionan'ny nasofary. Ny fandinihan-tena, ny fitsapana haingana, na ny fitsapana ao an-trano dia hoheverina ho tsy mety.
Mandehana fizaham-pahasalamana eny amin'ny seranam-piaramanidina izay ahitana fanamarinana mari-pana sy fangatahana fahasalamana. Rehefa tonga, raha misy mpitsangatsangana vita vaksiny feno maneho ny soritr'aretin'ny COVID-19 mandritra ny fizahana ara-pahasalamana, dia azo atao ny mitaky fitsapana RT- PCR amin'ny seranam-piaramanidina amin'ny vidiny manokana (150 USD).
Ny mpandeha an-habakabaka feno vaksiny feno dia afaka mivezivezy manerana ny hotely Travel Approved, mifandray amin'ireo vahiny hafa ary mandray anjara amin'ny hetsika hotely ihany.
Ireo mpandeha an-habakabaka feno vaksiny mijanona mihoatra ny 9 andro dia takiana amin'ny andrana amin'ny andro faha-9 (vidin'ny mpitsidika 150 USD) ny fijanonany ary raha vao ratsy ny fitsapana azy ireo dia mety hiditra ao amin'ny Federasiona mandray anjara amin'ny fitsangatsanganana, fisarihana, trano fisakafoanana, fisotroana amoron-dranomasina, fivarotana antsinjarany, sns.
Ny 1 Mey 2021 mpandeha an'habakabaka feno vaksiny dia tsy voatery mandefa fitsapana RT-PCR fivoahana. Raha mbola ilaina ny fitsapana mialoha ny fiainganana ho an'ny firenena itodiana, ny fitsapana RT-PCR dia horaisina 72 ora alohan'ny fiaingany. Ohatra: Raha mijanona 7 andro ny olona iray dia amin'ny andro faha-4 ny fitsapana alohan'ny fiaingany; raha mijanona 14 andro ny olona iray dia hatao amin'ny andro 11 ny fitsapana azy ireo mialoha ny fiaingany.